अनुदित कथा: सानी केटीका आँसु – Dainik Lumbini
के हत्याराहरू पनि फुटपाथमा उभेर फलफूल किन्छन् ? के तिनीहरू पनि रूपैयाँको सात गोटाको साटो आठ गोटा पाउन मोलमोलाइ गर्दछन् ?
(सुनील गङ्गोपाध्याय बंगाली भाषाका कथाकार हुन् । उनको यो कथा ‘सन्त्रास तथा अन्य कथाहरू’ बाट साभार गरिएको हो । सन् १९९४ मा प्रकाशित सुनीलको अंग्रेजी कथा संग्रह ‘फियर एण्ड अदर स्टोरिज्’ कथा संग्रहको नेपाली अनुवाद योगेश राजले गरेका हुन् । यसको प्रकाशन विसं. २०५७ वैशाखमा ‘साहित्य गुठी’ले प्रकाशन गरेको हो । कथाले उठाएको विषय वर्तमान समयमा कत्तिको मेल खान्छ भन्ने मुल्यांकनको जिम्मा पाठकलाई सुम्पिदै पाहुरमा यो अनुवाद प्रकाशन गरिएको छ ।)
साँझ अबेर पुसिलाई घरबाहिर कहिल्यै जान नदिने शपथ उसले मनमनै खायो ।
त्यत्रो ठलो शहरको बारेमा सोनामोनिलाई केही थाहा थिएन । शिवबाबुले नाउँ लिएका सबै मानिसहरूलाई ऊ कहाँ कहाँ भेट्टाउन सक्तथी ?
झोंक चलेर आउँछ…